Mulki Ahmed Warsame in Norway guurdoon | Guurdoon Free Online social media web
Mulki Ahmed Warsame in Norway guurdoon
Marka waad mahadsan tihin marka labad waxan halkan isaga qoray inaan helo wiil somali oo aqoon leh aniga waxaan ahay naag garoob ah waxaan jiraa 34 sano waxaan rabaa nin daacad ah guurdoon ah , guur xalaal .
qofka daacad ah haku soo qoro meesha uu joogo iyo taleefankiisa coommentiga sidoo kale dad’diisa ha soo qoro thanks
Salacaykun walaal aad baan ku salaaamay waxaad ka dhawaajisay wax sax ah loo baahan yahay ruux kasta oo wax garad ah fahmi karo taas waa taas
Tan kale arinta kale point ah aniga ahaan da da waa 30
Waxaa joogaa ilaa 7 sano suoth africo
No waaa ..”+27613126497
Pingback: Kacsi la’aanta kediska maxaa kuu keeni kara | Guurdoon Free Online Dating
Magacayguu waa axmed ilaahay balankii ayaan kudhaartee guurkaaga diyaar baan uahyvwaxaan joogaa hargeisa my name is ahmed 00252634090292
Diyaar baan kuu ahay ilaahaybaan kudhaartee daacadna waan ahay axmed jooga hargaysa waxaan jira 30
Diyaar baan kuu ahay mcn waxaan joga hargeisa my age 30 telephone 00252634090292 ilaahaygaan kudhaartee diyaar baan u ahay guurkaaga
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته salaan kadib waxan ahay wiil ehelu diin ah waxan jooga hargiesa waxan guurdoon daacad ah dadaydu waaa 31 waakaa tell: 002524097779
+918870547758 waxan ahaay nin waxa baratay waxana iga la so xarikartaa lanbarkaa thnks
Asc Walashay Waligay Waxan Ku Fikiri Jiray In Nolosha An La Qeebsado Gabadh Garob Ah Waxan Jira Inta U Dhaxayso 36 Ila 30jir Waxan Jecla In An Ku Waydiyo Caruur Miyad Haysa Mise Hadal Laguma Dhamaysan Karo Qoraal Waxan Joga Kenya +254701949180 Plz Your Phone Inkasto Calaf Jiro Bal So Dadal Si An U Wada Xidhidhno Mahadsanid
Asc walashey waxan ahay wiil guurdon ah waxan 37 004915213321719
Asc wr wb walaal waxaan ahay guurdoon waxaan jiraa 27 sano waxaana ku noolahay sweden waxaan bartaa diinta culuumteeda kala duwan waakan telkeyga
+46762053677 ila soo xarir
Magacayga waa ibraahiim Waxaan ahay guurdon da.dayduna was 27 hadii ay daacad kaa tahay waxaa igala soo xariirtaa almaqdashi143@gmail.com phone number +251944107785
Abaayo waxan ahay wiil guurdon ah waxan deganahay Norway.36 jir
Iga soo wac. 47278756
waxn jiraa 26 waxn joga ethiopia waxn leeyahay aqoon diini iyo maadi labada wan,ubahanay gabar adiga ookle 00251913743330
dhamaan tiin wan idin salaamay
salaan kadib inantaas hadii ay
daacad tahay insha alahu
wey heli nin fiican
qofkii daacad ah
mawaaynaya qof wanaagsan
aniga waxan baadi goober
wana kaas nambarkeyda
Macaaney waxaan ahay guurdoona waxaana ku noolahay Europe ila Soo xiriir was kaa helay
Waa ku salaamey abaayo magaceyga waa axmed waxaan kugula noolaha wadanka Norwey da deyda waa 35 sano…telfongan igala so xariir…40994660
Asc abaayo mcnto waxaan jogaaa dalka South Africa waxaan 0738537865
Maxay tahay fawdada sidan ah .. telefoon telefoon Badana Meeshu
Daauud C awed Ciise
walaal waxaan arkay Qoraalkaagii ahaa inaad guurdoon tahay oo doonayso nin diin iyo iimaanba leh. walaal waxaan helay warkaaga waqti aan u baahanahay cid aan nolosha laqaybsado. nasiib xumo anigu meeshaada majoogo ee waxaan ku noolahay somaliland, Hargeysa. Waxaan aniguna waxaan u baahnaa inan Naag Yurub degan oo aan guursado kadibna aan Yurub kula noolaado sababo badan dartood:
Tusaale ahaan waxaan kamid ahay Dadka Naafada Jidhka kamid ah balse nasiib u yeeshay inuu waxbarto oo leh waxbarasho heer jaamacadeed ah. waxaan ku takhasusay cilmiga Development and Disability. waxaan iminka jiraa 45 sano. waxaan usoo shaqeeyey Hay’adaha Qaramada midoobey iyo kuwa caalamiga ah ee somaliya ka shaqeeya. waxaan lataliye dhinaca mashaariicda ah usoo noqday Wasaarado dawladeed iyo kuwa aan dawli ahaynba. Waxaan kale oo ahay Nin wax weyn kusoo kordhiyey Bulshada Somaliland ee aan kamidka ahay. Waxaan ahaa Ninkii u horeeyey ee u kaca dadka naafada ah inay helaan waxay xuquuq ku leeyihiin ummadooda kadib markaan arkay in umadani tahay mid dadkaas ugu talo gashay inay dawersi mooyaane wax kale loo ogolaado.
Si ay taasi iigu suurto gasho, sanadkii 2000 ayaan bilaabay inaan Qof kasta oo naafo ah ugu tago guri kamidka yahay si aan u fahamsiiyo inay dadka lamid yihiin oo wax qab san karaan haday codkooda iyo caqligooda mideeyaan. waxaan ololahaa wadaba, sanadkii 2003, ayaan ku guuleystey inaan 2500 Qof oo Naafo ah isugu keeno Barxad weyn oo Hargeysa dhexdeeda iyadoo xukuumad iyo shicibba ay xaadir yihiin maalintaas oo ahayd 3b diisembar oo adduunyada laga xuso maalinta naafada. halgankaas oo aakhirkii keenay inay dadka naafada ahi yeeshaan 32 urur oo shaqeeya iyo Dalad weyn oo ay ku midoobeen. waxay kamid noqdeen bulshada inkastoo weli ay jirto caqabad weyn oo ay u sabab tahay nidaamka qabyaalada ku dhisan.
Si wixii aan Qabtay aan wax ka badan u Qabto, waxaan ku talo jirey beryahan inaan helo Qof dumar ah oo wadamada Yurub mid kamid ah joogta oo aan guursado. Haweenaydaas oo guurka kasokow aan si isku mid ah u wada shaqaysano anigoo u hogaaminaya dhinaca horumarinta aduunka iyo aakhiradaba.
Waxaan ku talo jiraa inaan yurub imaado oo aan la imaado Qorshe weyn oo Qoraal iyo Muuqaalba leh oo la iimaalgeliyo kadibna aan aniga iyo marwadaydu deegaanada soomaalida kawada fulino. Sidaas darteed, waxaan kaa codsanayaa inaad ahmiyada aniga isiiso oo aad iska ilowdo inaad guursato Nin reer sweden ah waayo kuwa halkaas joogaa intooda badan caydh ay Qaataan mooyaane hamad kaleba maleh amase Aqoontiiba waanay u lahayn.
Anigu hadaan halkaas imaado waxa caydhnimo lagu qaato anaaba kabadsanaya oo xitaa waxa suurta gal ah inaad adigu aniga lacag igu qaadato maadaama aad ii adeegayso. mida kale, waxa aan kugula hadlayaa waa run oo daacad baan kuula hadlayaa. weligayna Qof Dumar ah iyo mid nin ahba been umaan sheegin waayo Qof diin leh oo muslim ah oo Diinta islaamka ku dhaqma baan ahay. Mida kale nin shaqaysanaya dibed iyo Gudaba oo fikrado Ganacsi iyo kuwo Mashaariiceedba hindisaya baan ahay. Waxaan kale oo ahay nin isagoo ninkaagii ah hadana kuu noqonaya macalin oo aad aqoon iyo xadaarad sida caalamka loola shaqeeyo aad ka baranayso muddo gaabanba.
Midda kale waxa laga yaabaa inaad sida dadka kaleba Khaladka uga aaminsan yihiin dadka naafada ah inaad istidhaahdo ma maantuuba Qof naafo ahina kusoo damaaciyey. markaas waxaan filayaa inaad Qof muslim ah tahay sida aad qof muslim ah u doonaysey. Inaad Dadka ay dadku yasaan u fahamto inay yihiin kuwa ilaahay agtiisa sharaf ku leh, wixii laxaad la’aantiisa kaga maqnaana uu u gelinayo meel kale. Waxaan hubaa in labadeena hadaynu isguursano Ajar weyn ilaahay xagiisa ka helayno.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad istidhaahdo tolow bilaa uu dhinaca ninnimadana naafo ka yahay oo oo aanuba haweeneydiisa Qancinayn. waxaanse hubaa inaanu nahay Naafo ahaan kuwo ilaahay xooggii jidhkooda ka maqnaa u geliyey Caqligooda iyo Qoodhohooda. Waxaanan Hubaa in markaynu nafta wadaagno inaan ku dareensiin doono farxad weyn oo kugu abuuri doonta jacayl iyo hiigsi nololeed.
Sidaas darteed , waxaan walaashay kaa codsanayaa inaad telefoonkayga igala soo xidhiidho sida ugu dhakhso badan si aynu u wadahadalo oo uga wada arinsano sidaynuu noqon lahayn Qoys. markaynu taas isla fahamno, baynu wixii kale sii ambaqaadaynaa.
Laba mid baan kaa sugayaa inaad ii samayso:
1. Inaad isoo sheegto inaad tahay Qof danaynaya arintan aan kusoo banadhigay.iyo inkale.
2. Haddii aad noqoto Qof danaynaysa, halkaas baynu arinteena kawadanaynaa ilaa aynu dhamaystirano. Haddi aadan danaynayna, fadlan adigoo iisoo sheegaya, waxaan kaa codsanayaa inaad u bandhigto Dumar kale oo halkaas jooga oo aad iga caawiso sidaan Qof kale u heli lahaa. wax abaal loo galo rag baa u fiican, aniguna waxaan kuu balan qaadayaa inaan abaalkaaga gudi doono oo aqoon walaaltinimo oo intaynu noolahay jiri doonta ina dhexmari doonto hadaad wax iisuurto geliso iyo Haddii kaleba.
Waxaynu nahay dad muslim ah oo ilaahay dartii usoo wada xidhiidhay, kuma saamixin maalinta qiyaamaha haddii sirtaas aan kuu dhhibey aad cid kale u sheegto oo aan ka ahayn cid aniga Dantayda aan kuu sheegtay iiga dhamaynayso haddii aad adigu maaranto.
Daa’uud Cawed Ciise
Masalaha residential area
Maxaa gaagalay qaraarka ku hayo ibadanaa9